Xildhibaan Xasan Shiikh: Hoos U Dhac Dhanka Amniga Ah Ayaan Dareemay Tan Iyo Markii Aan Dalka Kusoo Laabtay – Kalfadhi
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Shiikh Maxamuud oo wareysi siinayay laanta Af-Soomaaliga ee VOA-da ayaa sheegay in uu dareemay hoos u dhac dhanka amniga ah tan iyo markii uu dalka kusoo laabtay ku dhawaad laba sano oo uu ka maqnaa.
Xasan Shiikh waxa uu sheegay in uu dareemayo in qaabka loo maareeyay aminga iyo hay’adihii ka shqeynayaba ay ahayd qaab laga wanaagsanaa.
“ arrimaha aminga, sida ay u socdaan , hay’adihii amniga iyo ciidamadaba waxaan is leeyahay sidaan ay u socdaan si ka wanaagsan baa loo sameyn karay ”
Xiriirka dowaldda federalka ah iyo maamul gobolleedyada ayuu sheegay in iyana uu dareemayo in aan loo maareyn hannaan wanaagsan isla markaana dowladda laga rabo in xal deg deg ah ay ka gaarto khilaafka kala dhaxeeyo dowlad gobolleedyada.
Sidoo kale madaxweyne Xasan Shiikh ayaa sheegay in xukuumadda iyo maamulka talada dalka hadda hayaa ay jiraan meelo ay ka sameeyeen horumar sida dakhliga soo gala dalka, taasna ay ku ammaananyihiin.
Aragti: Xildhibaane Marka Hore Difaac Danta Dadweynaha